विविध | गृहपृष्ठ | Page 6
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन शुरू गरेको छ । स्मार्टले नेप...
काठमाडौं । मानवीय स्वार्थको हानथाप हुने वर्तमान समयमा पशुको समस्या बुझ्ने फुर्सद कसलाई होला ? पृथ्वीमा मान्छेक...
समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग
on: २७ मंसिर २०७५, बिहीबार ०७:५२ विविध
काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले हालै मात्र जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को विरोध गरेको छ । बुधवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष टोपबहाद...	बिस्तृतमा
अवालेको निलम्बन फाइल पठाउन आदेश
on: २६ मंसिर २०७५, बुधबार ०८:२० विविध
काठमाडौं (अस) । विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गरेको आरोप लागेका नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट सुवर्ण अवालेको उडान अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने फाइल पठाउन मंगलवार सर्वोच्च अदालतले निगमलाई आदेश दिएको...	बिस्तृतमा
एन्ड्रिजको तेस्रो सेवाग्राही दिवस सम्पन्न
on: २६ मंसिर २०७५, बुधबार ०८:१९ विविध
काठमाडौं (अस) । अन्तरराष्ट्रिय प्रविधि समूह ‘एन्ड्रिज’ले जलविद्युत् उत्पादक तथा सेवाग्राहीसँग छलफल गर्दै तेस्रो सेवाग्राही दिवस काठमाडौंमा मनाएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा भएको एन्ड्रिज र सेवाग...	बिस्तृतमा
१० किलो चरेश बोकेर हिँडेका कमललाई प्रहरीले पक्रियो
on: २४ मंसिर २०७५, सोमबार १३:१७ विविध
मङ्सिर २४, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले १० किलो ४ सय ग्राम चरेशसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । परिसरको टोलीले चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ मा लागुऔषध बोकेर हिडिरहेको अवस्थामा धादिङक...	बिस्तृतमा
प्रस्तावित चारै राजदूतको नाम अनुमोदन
on: २४ मंसिर २०७५, सोमबार ०७:४९ विविध
काठमाडौं । संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले विभिन्न चार मुलुकमा राजदूतका लागि प्रस्ताव गरेका नामलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको आइतवार बसेको बैठकले प्रस्तावित राजदूतको...	बिस्तृतमा
पञ्जीकरण नहुने सवारी गुड्न नपाउने
on: २४ मंसिर २०७५, सोमबार ०७:४८ विविध
काठमाडौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मङ्सिर मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण नहुने सार्वजनिक यातायात पुस १ गतेदेखि गुड्न नपाउने भएका छन् । उद्योग...	बिस्तृतमा
१० रुपैयाँमै कपडा विक्री, आम्दानीबाट विद्यालय सञ्चालन
on: २२ मंसिर २०७५, शनिबार १२:५८ बजार, विविध
मङ्सिर २२, ललितपुर । के तपाइँ एक पटक प्रयोग गरिसकेको वा प्रयोगमा नआएका लत्ताकपडा, पुस्तक, स्टेशनरीका सामग्रीहरु कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्यामा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए होस्टेहैंसे नामक संस...	बिस्तृतमा
प्राधिकरणले ल्यायो स्मार्ट मिटर
on: २१ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०७:०१ विविध
काठमाडौं (अस) । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकको घर तथा कार्यालयमा नै नगई प्रविधिको प्रयोग गरेर मिटर रिडिङ गर्न स्क्ने प्रविधि भित्र्याएको छ । प्राधिकरणले सो प्रविधिलाई एडभान्स मिटरिङ इन्...	बिस्तृतमा
on: २० मंसिर २०७५, बिहीबार ०६:४१ विविध
काठमाडौं । पश्चिमी चिसो वायुको प्रभावले बादल लाग्दा मुलुकका अधिकांश भागको मौसममा चिसो बढेको छ । उच्च हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात र पहाडी भेगका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षासमेत हुने...	बिस्तृतमा